गुइनग्याम्प (एजेन्सी) – युवा स्टार केलियन एमबाप्पेले बिहिबार राति विश्व विजेता फ्रान्सलाई हारबाट जोगाएका छन् । आइसल्यान्डसँग हारतर्फ उन्मुख भएको खेलको ९०औं मिनेटमा एमबाप्पेले गोल गर्दै फ्रान्सलाई हारबाट जोगाएका हुन् । खेल २–२ गोलको बराबरीमा सकिएको हो ।
मैत्रीपूर्ण खेल अन्तरगत फ्रान्सको गुइनग्याम्पमा बिहिबार राति भएको खेलमा आइसल्यान्ड जित नजिक पुगेर पनि अन्तिमा समयमा सम्हालिन नसक्दा बराबरीमा रोकिएको हो ।
आइसल्यान्डका विरकिर विजरनासन र कारी आर्नासनले गोल गरे । फ्रान्सका केलियन एमबाप्पेले गोल गर्दा एक गोल उपहार पाएको थियो । आइसल्यान्डका होलमारले आत्मघाती गोल गरेका थिए । ३०औं मिनेटमा विरकिरको गोलबाट आइसल्यान्डले पहिलो हाफमा १–० को अग्रता बनाएको थियो ।
५८औं मिनेटमा कारीले गोल गरेपछि आइसल्यान्डले विश्वविजेताविरुद्ध २–० को अग्रता बनाएको थियो । २–० ले पछि परेपछि फ्रान्सले खेलमा दवाव सिर्जना गरेको थियो । ८६औं मिनेटमा होलमारले आफ्नै पोस्टमा गोल गरेपछि फ्रान्स खेलमा फर्किएको थियो ।
९०औं मिनेटमा स्टार एमबाप्पेले गोल गरेपछि फ्रान्सलाई सम्भावित हारबाट जोगाए ।
प्रकाशित : शुक्रबार, असोज २६, २०७५०८:५७
वर्ष २०१८ मा मेसी भर्सेस रोनाल्डो ! कसले गर्यो धेरै गोल ?
नेपालका तीन मुख्य डिफेन्डर घाइते, नेपाली टोली संकटमा !
पारस खडकाले दिलाए नेपाललाई दास्रो सफलता !
रामोसको शतकीय गोलसँगै रियल विजयी